Imisa salaanta Rukuucda iyo Rikaabka la wadayaa | allsanaag
Imisa salaanta Rukuucda iyo Rikaabka la wadayaa
100 sano ka hor, Muusi Biixi awoowayashii gabadhihii gumaystihii reer Yurub ee diiday inay Ciidda Ber bera ku dul socdaan ayeey Tuurta ku qaadayeen . Maantana Salaanta rukuucda ayeey saf ugu galeen Hailemariam Desalegn
Marka Berbera Gabadha gumaysiga u timid tuurta lagu qaadayey, akhriso warqada Odayasha Laasqoray joogay qorayeen . Ninkaas baa maanta doonaya inuu aniga ii dawladeeyo
Arninta Kowaad ayaa waxay ahayd in Beesha Warsangeli xaq u leeyihiin in Dal kasta oo hoos yimaada Boqortooyada Ingiriiska sida Hindiya in ay hub ku dhex qaataan, sababtoo ah heshiiska labada dawladood ee Saladanada Warsangeli iyo Ingiriiska kala saxiixdeen ayaa sidan qoraayey
Arinta labaad waxay cadaynaysaa in Ingiriiska ka hor Dekeda Berbera ay hoos iman jirtay saldanada Lasqorey. Waxaadna warqada ku arkaysaa Caaqilada degaanadaas Gobolada waqooyi galbeed oo saldanada warsangeli Gawaari uga gaday Yamen 100 Sano ka hor.
Tarjumaadda warqadda ku qoran afka Carabiga
← Alshabaabka gobolka Togdheer Sawirka maanta iyo danbiile dagaal →